Agora | MyLann – Online Restaurants Directory and Food Reviews in Myanmar
Food : 4.33 Decoration : 3.33 Service : 4
Price Range - 6000 Ks - 15000 Ks
No. 84, Kanbe Main Road, Yankin
အမှတ် (၈၂)၊ ကန်ဘဲ့လမ်း
Activities on Agora
Htoo Htoo Aung uploadedaphoto at Agora4years ago
Jesse Gage is eating at Agora5years ago
6000 Ks - 15000 Ks
Pop Corn is eating at Agora5years ago
Thurein Lwin reviewed Agora5years ago
သူငယ်​ချင်း ​တွေ နဲ့ ​အေး ​အေး ​ဆေး​ဆေး hangout နိုင်​တဲ့ ​နေရာ ​လေး ပါ. ကျွန်​ ​တော်​ က ​တော့ Beer Buttered Fish ကို ​ရွေး ဖြစ်​ ခဲ့ တယ်​. အ မြင်​ က သိပ်​မ လန်း ​ပေ မဲ့ ငါး အရ သာ က သာ မန်​ fish and chips ​တွေ လို မ ဟုတ်​ ဘဲ စီး​မျော သွားရ ​လောက်​ ​အောင်​ နူး ညံ့ ပါ တယ်​. Ice Cappucino က လည်း အဆင်​ ​ပြေ ခဲ့ ပါ တယ်​.​နောက်​ ထပ်​ Burritos နဲ့ Taco ​တွေ special cocktails ​တွေ ကို touch ဖို့ ​နောက်​ တစ်​ ခါ လိမ့်​ ပါ ဦး မယ်​....
Pop Corn Agora5years ago
FoodieNike reviewed Agora5years ago
ဒီ​နေ့ ကျွန်​မတို့ ထူးထူးခြားခြား​လေး စားချင်​တယ်​ဆိုပြီး My Lann app မှာ ရှာလိုက်​​တော့ Mexican food ရတယ်​ဆိုတဲ့ Agora ဆိုတဲ့ ဆိုင်​က​လေးကို ​ရွေးဖြစ်ပါတယ်​ ဆိုင်​ထဲကို ​ရောက်​တဲ့အခါ ဆိုင်​ခန်းက သိပ်​မကျယ်​​ပေမယ့်​ သစ်​သားခုံ​လေး​တွေနဲ့ ပတ်​ပတ်​လည်​က မှန်​ပြတင်း​ပေါက်​​တွေနဲ့မို့ ကျဉ်းတယ်​လို့​တော့ မထင်​ရဘူး သန့်​သန့်​ပြန့်​ပြန့်​ လူရှင်းရှင်းနဲ့ ထိုင်​လို့​ကောင်းတာမို့ ကျွန်​မတို့ ၃နာရီ​လောက်​ ထိုင်​ဖြစ်​ခဲ့တယ်​ Menu ထဲမှာ appetizer, tacos, quesadillas, burritoes စတဲ့ mexican food ​တွေတင်​ မဟုတ်​ဘဲ sandwich ကို ကိုယ့်​စိတ်​ကြိုက်​အစာထည့်​ပြီး မှာလို့ရတယ်​ asian appetizer ​တွေလဲ ရှိတယ်​ ကျွန်​မတို့က chicken tacos, pork burritoes, bean and cheese quesadilla သုံးပွဲ မှာလိုက်​တယ်​ သုံးမျိုးလုံးက​တော့ မြန်​မာလျှာနဲ့ အဆင်​​ပြေမယ့်​ အရသာမျိုးပါပဲ burritoes က နည်းနည်း​လေး ငန်​တာက လွဲလို့ အပြင်​က ဂျုံပြားက ပါးပါး ကျွတ်​ကျွတ်​ အထဲကအသားက အ​စပ်​အဟပ်​ ​ကောင်း​ကောင်းနဲ့ စားလို့ အဆင်​​ပြေပါတယ်​ Dessert လဲ ရတဲ့ အတွက်​ ကျွန်​မတို့က cinnamon apple flautas ကို မှာကြည့်​တယ်​ ​ရောက်​လာတဲ့အခါ မျက်​စိ​ရှေ့ မ​ရောက်​ခင်​ထဲက Cinnamon နံ့ သင်းသင်း​လေး ရ​နေပါပြီ ​ရောက်​လာတဲ့အခါမှာ အပြင်​အဆင်​​လေးက လှလှ​လေးနဲ့ vanilla ice cream, နာနတ်​သီးတုံး ​သေး​သေး​လေး​တွေနဲ့ ချစ်​စရာ​လေးပါ flautas ဆိုတာက ဂျုံထဲမှာ cinnamon suace နဲ့ ချက်​ထားတဲ့ ပန်းသီးကို အစာသွပ်​ပြီး ​ကျော်​ထားတာပါ အပြင်​က ဂျုံခွံ​လေးကလဲ ကျွပ်​ရွ​နေတာပါပဲ​Ice cream ​အေး​အေး​လေး နာနတ်​သီး ချဉ်​ချဉ်​​လေးနဲ့ flautas ပူပူ ချိုချို​လေးက အင်​မတန်​ လိုက်​ဖက်​ပါတယ်​ ​နောက်​ထပ်​လာစားရမယ့်​ ဆိုင်​ပါပဲ
mylann uploadedaphoto at Agora5years ago
Phyo Aung Soe reviewed Agora5years ago
ရန်ကုန်မှာ မက်ဆီကို (Mexico) အစားအစာရောင်းတဲ့ဆိုင် ရှားပါတယ်။ Mexican စာ လွမ်းနေတာနဲ့ အတော်ဘဲဆိုပြီးတော့ ဝင်စားဖြစ်တာပါ။ အမဲသားကင် Burrito (ဘူရီတို) မှာလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အားလူးကြော်လည်းပါပါတယ်။ Burrito ရောက်ရောက်လာချင်းမှာ ပုံစံကြည့်ကတည်းက ကောင်းမဲ့ပုံပါဘဲ။ အဲဒါနဲ့ပဲ Burrito ကြီးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်ပြီး ကိုက်လိုက်တဲ့ ပထမဆုံးအကိုက်မှာဘဲ "အားပါး၊ ကောင်းမှကောင်း" ဆိုသလိုပါဘဲ။ သွားစားကြည့်ကြပါ။ Mexican စာကောင်းကောင်းစားချင်ရင်ပေါ့။ ဆိုင်အပြင်အဆင်ကတော့ အရမ်းကြီးဆန်းဆန်းကျယ်ကျယ်မဟုတ်ဘဲ ရိုးရှင်းပြီး သပ်ရပ်ပါတယ်။ Service ကလည်း လိုလေသေးမရှိပါဘူး။
Writeareview for Agora
Report for Agora
Reserve table at Agora